पिपलको पातबाट धेरै राे’गहरुकाे यसरी औ-षधि बनाउन सकिन्छ , सबैले जानीराखौं ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ११, २०७८ शुक्रबार 179
काठमाडौं : हाम्रो घर वरपर कतिपय प्राकृतिक बनस्पति उम्रिरहेका हुन्छन, तर चिन्न न सकेर व्यर्थ त्यसलाई ना’स पार्दै जान्छौ । हाम्रै घर वरपर उम्रेका बनस्पतिमाहरुमा मनिषलाई मृ’त्यु सम्म डोर्याउने अनगिन्ति रो’गहरुलाई रोकथाम तथा पूर्ण रुपमा निर्मूलन गर्ने क्षमता हुन्छ ।
हामीले बुझ्न मात्र नसक्या हो नत्र भने हरेक रो’ग हामी आफैले निको पर्न सक्छौ ।हाम्रो समाजमा पिपलको पूजा गरिन्छ । धार्मिक विश्वासअनुसार लक्ष्मीको श्रा’पका कारण विष्णु भगवानले एकपटक वनश्पती बन्नु परेको थियो । जहाँ उनी पिपल बनेर जमिनमा उम्रिएका थिए । तर वैज्ञानिक दृ’ष्टिकोणले पनि
पिपलको महत्व कम छैन। यो मात्रै यस्तो बनस्पती हो, जो २४ घण्टा अक्सिजन दिन्छ । पिपलका पातलाई धेरै प्रकारका औ-षधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यस्तै रो’ग निर्मूलन गर्ने क्षमता भएको एउटा वोट हो पीपल । पिपलको जरा, बोक्रा र पातको अनगन्ती फाइदाहरु छन् जसमध्ये आज हामी यहाँहरुको माझमा “पिपलको पात” को बिशेस्ता बारे जानकारी गराउन चहान्छौ ।
रुघा–खोकीको अचूक औ-षधि: मौसममा आउने बदलाबका कारण हुने सर्दी, खोकी तथा रुघाबाट राहात पाउन पिपलको पातको प्रयोग गर्नुहोस् । पिपलका ५ ओटा पात सफा पानीले पखालेर दुधसँग उमाल्नुहोस् । यसमा चिनी हालेर बिहान र साँझ पिउने गर्नुहोस् । दुई दिनमै तपाईको रुघा–खोकी ठीक हुने छ ।
दमका रो’गीको लागि बूटी: लगातार खोकी रहने (दम)को रो’गीका लागि पिपलको रुख एक औ-षधिको रुपमा काम गर्छ । यसका लागि पिपलको पातसँगै जोडिएको कमलो डाँठको बोक्रा निकालेर भित्रको भाग घाममा सुकाउनुहोस् ।त्यसको चूर्ण बनाएर दम रो’गबाट ग्र’सित बि-रामीलाई मनतातो पानीसँग पिउन दिनुहोस् ।
तीन महिनासम्म नियमित रुपमा यस्तो चूर्ण सेवन गरे दम रो’ग पूर्ण रुपमा निको हुन्छ ।निमोनियामा राहत: निमोनियाबाट ग्र’सित व्यक्तिले पिपलको पातको जुस बनाएर पिउँदा धेरै राहत पाउँछन् ।दाँतका लागि: बलियो र सफा तथा सेता दाँतका पनि पिपलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पिपलको पातसँगै जोडिएको कमलो डाँठलाई दाँतुनको रुपमा प्रयोग गर्नुहोस् ।
यस्तै १० ग्राम पिपलको बोक्रा र २ ग्राम कालो मरिचलाई राम्रोसँग पिसेर बनाएको मन्जनले दाँत माँझ्दा दाँत तथा मुखसम्बन्धी धेरै समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ ।मुटुसम्बन्धी रो’गको औ-षधि: पिपलको पातले मुटुसम्बन्धी रो’गबाट बचाउँछ । यसका लागि पीपलको १५ वटा हरियो तथा हेर्दा राम्रो पात लिनुहोस्, कोपिला पात चाई प्रयोग नगर्नुहोस । प्रत्येक पातको माथिको र तलको केहि भाग कट्नुहोस । पातको बिचको भाग मज्जाले सफा पानीमा पखाल्नुहोस ।
एक गलास पानी एउटा भाडोमा राखेर पखालिएको पातलाई त्यसमा हाल्नुहोस र कम तापक्रम (आगो) मा पाक्न दिनुहोस । जब पानी उम्लिएर एक तिहाई हुन्छ, भाडोलाई आगो माथिबाट निकालेर पानी सेलाउन दिनुहोस र सफा कपडामा छानेर चिसो ठाउमा राख्नुहोस । त्यति गरेपछि तपाईको औ-षधी त्यार हुन्छ ।
त्यार भएको उक्त औ-षधीलाई तीन खुराक बनाएर प्रत्येक तीन – तीन घण्टामा सेवन गर्नुहोस । हृदयघात (हार्ट अटैक)को केहि समय पश्चात लगातार पन्द्रह दिन सम्म यसलाई दैनिक सेवन गरेमा हृदय पुन: स्वस्थ बन्छ र हृदयघातको सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ । यदि तपाई मध्ये कोहि हृदयघात (हार्ट अटैक)को बिरामी हुनुहुन्छ भने यो उपचार पद्धती अवस्य अपनाउनुहोस् ।
पीपलको पात नै किन ? पीपलको पातमा हृदयलाई बल र शक्ति दिने अद्भुत अर्थात् अचम्मको क्षमता हुन्छ । यस पिपलको पातबाट बनाएको औ-षधिलाई बिहान ८ बजे, ११ बजे र २ समय बिलाएर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।
औ-षधि सेवन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा : खाली पेट औ-षधि सेवन न गर्नुहोस, नास्ता गरेर मात्र यो औ-षधि सेवन गर्नुहोस ।सेवन अबधि सम्म तेल भएको खानेकुरा र चामल प्रयोग गर्नु हुदैन। माछा, माशु, अण्डा, नुन, चिल्लो पदार्थ, मदिरा र धुम्रपानको प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनार, मेवा, आंवला, बथुआ साग (प्राय: नेपालको तराई भेगमा पाईन्छ), लहसुन, मेथी दाना, मौसंबी, मासको दाल , किशमिश, गुग्गुल, दही इत्यादीको प्रयोग गर्नुहोस ।ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु: यो पद्धतिको कुनै साइड इफेक्ट छैन । कुनै गम्भीर रो’ग भएमा, यो पद्धति अपनाउनु अघि आफ्नो चिकित्सक संग अबस्य परामर्श लिनु होला ।
Prevमेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई ओम अस्पतालमा वि’शेष छुट !
Nextराष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक डेव ह्वाटमोरले दिए राजीनामा !